Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts zibhiyozela iMigama ebalulekileyo ngoTyalo-mali olutsha lweCaribbean
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts zibhiyozela iMigama ebalulekileyo ngoTyalo-mali olutsha lweCaribbean
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Education • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeLuxury • iindaba • Resorts • Xanduva • Imitshato yothando • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
ISandals Resorts International (i-SRI) ibhengeze isikhumbuzo seminyaka engama-40 sophawu lwayo oluphambili kwizibini ezitshatileyo kuphela, iiSandals Resorts. Ukusukela ekuvuleni iingcango zayo eMontego Bay nge-27 kaNovemba ngo-1981, iiSandals Resorts ziye zonwabisa iindwendwe, zadibana nabacebisi ngezohambo, kwaye zanceda ekwakheni ukhenketho kwiCaribbean yonke, apho izibophelele ekuphuhliseni ubungangamsha bokubuka iindwendwe kulo mmandla wonke, enye yezona zithandwa Iindawo zokuhlala ezomeleleyo emhlabeni.
Inkampani yokuchithela iiholide ibhiyozela iminyaka engama-40 yazo zonke iindwendwe ezibandakanya konke.
Kukhunjulwa ilifa lomseki walo ongasekhoyo uGordon "Butch" Stewart "kwaye kubekwa isiseko sekamva.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts zibhengeze iSchool Of Hospitality, iiprojekti zokhenketho zabahlali ezingama-40 zaseCaribbean, imibhiyozo ebanzi yabakhenkethi, nokunye okuninzi.
Inkampani yezorhwebo ebandakanya bonke abantu ibhiyozela isikhumbuzo sembadada ngokuhlonipha ilifa lomsunguli wayo, ongasekhoyo uGordon 'Butch' Stewart, ekhanyisa ifuthe lokhenketho kuluntu lwaseCaribbean, ejika iwotshi ngolonwabo olucwangcisiweyo. ngaphaya Zonke iiSandali zonke iiholide ezibandakanya wonke umntu, kwaye iya kuqhubeka nokongeza isimanga esiza kutyhilwa unyaka wonke.
"Lo nyaka uphawula isiganeko esimangalisayo kwiiNdawo ekuchithelwa kuzo iiSandals, kwaye ibaluleke kakhulu njengoko sithatha lo mzuzu ukuhlonipha into eyenziwe ngutata kwaye siqhubeke nelifa lakhe elihlonelwayo kwiCaribbean," utshilo uSihlalo weSigqeba se-SRI u-Adam Stewart. Ukusukela oko kwavulwa ngo-1981 Iimbadada zeMontego Bay, Siqhubekile nokuphakamisa kwaye sikhokele indawo ebandakanya konke ukubakho. Ngapha koko, sibonakalisile ukuba olona shishino lunomdla kakhulu kwaye luhlala luhleli luyilelwe kwiCaribbean. Ndinebhongo ukubhiyozela le nkqubela ibalulekileyo kwinkampani yethu kunye nosapho lwethu lweembadada njengoko sijonge kule minyaka ingama-40 izayo Umbono ophefumlelweyo weCaribbean kunye nezinto ezintsha. "
Ukuhlonipha iminyaka engama-40, iiSandals Resorts ziyaziqhenya ngokubhengeza:
IGordon “Butch” iStewart iSikolo samazwe ngaMazwe sokuBamkela kunye noKhenketho
Ukuhlonipha umsunguli weembadada ongasekhoyo uGordon “Butch” Stewart kunye nomoya wakhe odumileyo kwezorhwebo kunye nenkolelo yobomi kumandla emfundo, iSandals Resorts International ibhengeza ukwakhiwa kweGordon “Butch” Stewart International School of Hospitality and Tourism kwiYunivesithi yase I-West Indies (i-UWI) kunye kunye neFlorida International University's (FIU) yeChaplin School of Hospitality & Tourism Management. Zombini iinkokeli kwimfundo yezokhenketho, i-FIU ngokubambisana ne-UWI, ziya kuphuhlisa isizukulwana esilandelayo sobunkokeli bezokhenketho bamanye amazwe kunye nobunkokeli bokubuk 'iindwendwe, ngenkqubo yesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala. Isikolo esitsha siza kubekwa kwiKhampasi yaseNtshona yeYunivesithi yaseWest Indies, eMona kwikomkhulu lezokhenketho laseCaribbean eMontego Bay.
Iziko eliphambili, elikhokelwa luphando, iGordon “Butch” iStewart International School of Hospitality and Tourism iza kubonelela abafundi ngamathuba emfundo anentsingiselo ngaphaya kweklasi. "Utata wayekholelwa ekufundeni ngamava - 'uqeqesho emsebenzini,' njengoko wayehlala esitsho, utshilo uStewart. “Njengosomashishini ogqibeleleyo kunye nomphuphi wobomi bonke, wayeyazi ukuba impumelelo izalwe ngaphaya kwegumbi lokuhlala; ifunyenwe endaweni yamaxesha okuhlola kunye nokufumanisa. Yile nto izakukhuthaza ikharityhulamu ekumgangatho wehlabathi, ibeka abafundi kumava okwenyani njengenxalenye yophuhliso lwabo. ”
Utyalo-mali kwezemfundo kudala luyinto ephambili kwi-SRI, kwaye isikolo esitsha siza kuncedisa iYunivesithi yeSandals Corporate, eyasekwa ukubonelela ngamalungu eqela leSandals laseCaribbean ngamathuba okuphucula nokuphucula izakhono zomsebenzi kunye nokufumana isidanga kunye nesidanga sokuqala. "Xa sityala imali kubantu baseCaribbean, sityala imali kwikamva lommandla," utshilo uStewart.
I-40 yama-40 Iphulo: Iiprojekthi eziNceda uLuntu lweCaribbean
Nangona yayingelilo ixesha lokusekwa kweembadada kumashumi amane eminyaka eyadlulayo, umoya woxanduva kwezentlalo (CSR) uyinxalenye yelaphu lenkampani ukusukela oko yasekwayo. Unxibelelwano phakathi kokhenketho kunye nentlalo-ntle yoluntu lwaseCaribbean apho sisebenza khona alunakuphikwa, utshilo u-Adam Stewart. Imbeko yenkampani engama-40th Isikhumbuzo, iiSandals Resorts zamanye amazwe, kunye ne Isiseko seembadada, umbutho ongajonganga kwenza nzuzo owasungulwa ngo-2009 ukunceda i-SRI yenze umahluko kubomi babantu baseCaribbean, ichonga iiprojekthi ezingamashumi amane ezibonisa olona khonkco lukhoyo phakathi kwezokhenketho - eyona ndawo inempembelelo kumzi-mveliso kunye namandla ayo okuguqula uluntu lwaseCaribbean kunye nokuphucula ubomi.
Iiprojekthi ziya kukhethwa kwiindawo ezintlanu eziphambili: ukuxhasa amafama asekuhlaleni, uqeqesho lokubuka iindwendwe kunye nokuqinisekiswa, ukugcina izibonelelo zendalo, ukusebenzisa ubugcisa bobugcisa obukhethekileyo kunye nokufikelela eluntwini. Ukusuka kwimizamo yolondolozo lwendalo kwindawo ye-UNESCO yeLifa leMveli kwiJamaica eBlue naseJohn Crow Mountains kunye nokuphucula amandla amafama ukwandisa imizamo yabo kwimveliso yokutya okuzinzileyo, ekusebenzeni ngokusondeleyo nabenzi basekuhlaleni ukwandisa iitalente zabo, amalungu eqela leSandals aya kube eqengqeleka. baphakamise imikhono yabo yokuzisa ezi projekthi ebomini kwaye bamema iindwendwe ukuba zingene.
Rhoqo kwiXesha leSiqithi-Ukwazisa iiSandals PalmCast
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts ziyayichitha incoko kwaye zigcina iCaribbean iphambili kunye ne-podcast yayo yokuqala, "Iimbadada zePalmCast," inika abaphulaphuli ithuba lokungena ngaphakathi kuzo zonke izinto ezenzekileyo kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezineziqendu zemizuzu eli-13 ukuya kwengama-20. Ukuqonda kweengcali, ukujonga ngokubanzi iiholide, kunye nodliwanondlebe olukhethekileyo kunye nezinto ezothusayo apha endleleni. Ngomndilili wokuphindaphinda umyinge weendwendwe osondela kwiipesenti ezingama-50, iindwendwe zeembadada zithembekile kakhulu kwaye zinomdla wokufunda ngezinto ezenzekileyo kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide nakulo lonke ulwandle lweCaribbean kwiiNdawo zokuHlala zeSandals, ummeli wegama elinexabiso laseCaribbean.
Kwipropathi, iindwendwe zinokuzibandakanya kumbhiyozo kuzo zonke iiSandals Resorts ngokunqonqoza kubandakanya:
Ukusuka kwi-OG ukuya kokungaqhelekanga-ke ngoku kunye neeCocktails zesiqhelo kunye neNkonzo eNtsha yePoolside
Njengabaqambi bebha yokuqubha, iiSandals ziyazi into okanye ezimbini malunga nokugalela ii-cocktails ezifanelekileyo zamachibi. I-brand ibhiyozela ngokwenza ezinye izinto ezithandwayo kunye nokubuyisa ezinye ezokuqala. Iindwendwe zinokuthi zithathe imemori yendlela xa zisebenzisa icala lecala ngo-1981/2021 kwimenyu yecocktail ukutshintsha phakathi kwezinto ozithandayo ngaphandle kokusebenzisa umatshini wexesha ukufika apho. Zonke iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts ziya kuthi kwakhona zenze inkonzo entsha yamachibi asebenzela indawo yokutya ephefumlelweyo yaseCaribbean kunye nemenyu yecocktail ukuze iindwendwe zikwazi ukuhlala echibini ixesha elide. Ukongeza, imivalo kunye neeresityu kulo lonke uphawu luza kuqala amava amatsha e-cocktail aqukethe ii-cocktails ezisibhozo ezityiweyo zisebenzisa imixube eyahlukileyo, utywala beprimiyamu, izithako ezisandula ukwenziwa, kunye nemifuno ekhethwe ngesandla kwiifama zalapha.
Iimbadada zibuyisa umnyhadala
Iindwendwe zeembadada zinokwenza itheko njengowe-1981 kunye nemibhiyozo ekhethekileyo yeeveki ngeveki ukukhumbula iminyaka engama-40 yolonwabo. Iindwendwe zinokuntywila kwilanga ngelixa elidlulileyo lihlangana nekamva eliveliswe zii-DJs ezijikelezayo ezijikeleza umculo ophefumlelweyo kunye nabathengisi abakhonza ii-cocktails zakudala.
Ingqokelela yeVenkile yoRhwebo kwiiVenkile zeNdawo yokuHanjiswa kweNdlu yaseBeach
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts zisungula i-EST. I-t-shirt yokuvuna ephefumlelweyo yango-1981 kunye nokuqokelelwa kweentengiso okufumaneka kuzo zonke iivenkile zeehotele zaseBeach House. Iindwendwe zinokukhetha kulwakhiwo lwe-nostalgic kunye noludlamkileyo olunika imbeko kwisimbo sexesha lesiseko seSandals, esifumaneka ukuthengwa ukuqala ngo-Novemba.
Ukongeza kwizicwangciso zepropathi, Amalungu eSandals anethamsanqa akhetha iMivuzo yamalungu kunye namaqabane eengcebiso ngeeNdawo zeSandals zexesha elide aya kunyangwa ekubuyiseleni iindwendwe isidlo sangokuhlwa kwaye anokumenywa ukuba ajoyine isikhumbuzo sokukhumbula isikhumbuzo seminyaka engama-40 kwi-Lady Sandals, Resorts zeembadada 'isayinitsha ye-yacht ekuhambo lokubhiyozela ukuhamba ngenqanawa ecaleni konxweme lwaseMpuma unyaka wonke.
Ukufunda ngakumbi malunga nendlela iiSandals Resorts ezibhiyozela ngayo i-40th Anniversary kunye nokuhlala usesikhathini kunye nezinye izinto ezothusayo ezizayo, Qiniseka ukuba undwendwela apha.
Ukubhukisha ukuhlala kwiiSandals Resorts, tyelela apha.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals® Resorts zibonelela ngothando ngabantu ababini abathandana kakhulu, amava eholide eNtofontofo ebandakanyiwe kwiiCaribbean kuyo yonke imimandla ye-15 eyothusayo yolwandle eJamaica, Antigua, eSanta Lucia, eBahamas, eBarbados, eGrenada, kunye nendawo entsha ye-16 eza eCuracao ngo-Epreli 2022. Ukubhiyozela iminyaka engama-40, inkampani ehamba phambili ebandakanya konke ukubonelela ngokubandakanya okusemgangathweni kunanoma yimuphi umhlaba. Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts ngokukodwa zibandakanya utyikityo loLuthando lweNest Butler Suites® olokugqibela kubucala nakwinkonzo; iingcibi eziqeqeshwe liGuild of Professional English Butlers; iRed Lane Spa®; Indawo yokutyela ye-5-Star Global Gourmet ™, eqinisekisa ukuba utywala busengaphezulu, iwayini yeprimiyamu kunye neeresityu ezikhethekileyo ze-gourmet; Amaziko e-Aqua anesiqinisekiso se-PADI® kunye noqeqesho; ngokukhawuleza kwe-Wi-Fi ukusuka elunxwemeni ukuya kwigumbi lokulala kunye neembadada zemitshato. Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts ziqinisekisa iindwendwe ngoxolo lwengqondo ukususela ekufikeni kwazo ukuya kumka nazo Iiprotocol zePlatinam zoCoceko, impilo kunye nokhuseleko amanyathelo enkampani enzelwe ukunika iindwendwe ukuzithemba okupheleleyo xa zisiya eholideyini kwiCaribbean kunye nesiQinisekiso seeKhefu zeSandals, inkqubo ebanzi yokukhusela iholide enesiqinisekiso sokuqala kumzi-mveliso weholide yasimahla yokufaka indawo kubandakanya inqwelo moya yeendwendwe ezichaphazelekileyo. Ngu-COVID-19 ukuphazamiseka kokuhamba okunxulumene. Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts ziyinxalenye yeeSandals Resorts International (zeSRI) ezinabanikazi bosapho, ezasekwa ngongasekhoyo uGordon “Butch” Stewart, equka iiholide ezinononophelo losapho. Ngolwazi oluthe kratya malunga neeSandals Resorts Luxury Included® umahluko, ndwendwela iisandals.com.